Kaddib Guushii Ay Ka Gaadheen Belgium, Paul Pogba Oo Shaaciyey In Ciyaartooyo Badan Ka Fadhiisan Doonaan Xulka Qaranka France – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaKaddib Guushii Ay Ka Gaadheen Belgium, Paul Pogba Oo Shaaciyey In Ciyaartooyo Badan Ka Fadhiisan Doonaan Xulka Qaranka France
Kaddib Guushii Ay Ka Gaadheen Belgium, Paul Pogba Oo Shaaciyey In Ciyaartooyo Badan Ka Fadhiisan Doonaan Xulka Qaranka France
Laacibka khadka dhexe ee xulka qaranka France, Paul Pogba ayaa shaaciyey inay khasab ku tahay ciyaartooyada inay ku guuleystaan Koobka Adduunka sababtoo ah waxa dhici doonta in xiddigo badan oo hadda ku jira xulka qaranka dalkaas ay ciyaaraha caalamiga ah ka fadhiisan doonaan marka uu tartanku dhamaado.
Pogba oo dhalleecayn loo jeediyey kulamadii saaxiibtinimo ee Faransiisku iskugu diyaarinayey ciyaaraha Koobka Adduunka ayaa marar badan lagu ooriyey, waxaanay taasi keentay inay dibedda usoo baxaan warar sheegaya inuu qorshaynayo inuu gebi ahaanba ka fadhiisto ciyaaraha caalamiga ah oo uu joojiyo inuu xidho funaanadda qarankiisa marka Koobka Adduunku dhamaado.
Inkasta oo ay da’diisu yartahay, haddana Pogba waa hoggaamiyaha rasmiga ah ee xulka qaranka France, qaabka uu kubadda uga farsameeyo khadka dhexe ayaana sabab u noqota in weerarka awoodda badan ee afka hore ugu diyaarsan ay goolal dhaliyaan.
Pogba oo warbaahinta kula hadlay magaalada St. Petersburg ee waddanka Ruushka oo ay ka dhacday ciyaartii ay kaga guuleysteen Belgium, ayaa waxa uu tibaaxay inay ahayd ahayd ciyaar, waxaase uu qiray in dalkiisu uu difaac ku jiray.
“Waxay ahayd ciyaar labada kooxoodba ku adag. Ibseddelka waxa keenay waxyaabo yaryar. Anagu waxa aanu ku xoog badnayn difaaca, waxaananu dhalinay gool koorne ah, laakiin hadda waxa na sugaysa ciyaar kasii weyn oo ah finalka Koobka Adduunka.” Sidaas ayuu yidhi Pogba oo ka hadlayey ciyaartii ay kaga guuleysteen Belgium.
Intaas kaddib Paul Pogba waxa uu shaaciyey hal arrin oo khasab ka dhigaysa inay ku guuleystaan Koobka Adduunka, waxaanu yidhi: “Waxa laga yaabaa, in ciyaartani noqoto tii ugu dambaysay ee qaar ka mid ah laacibiintayada. Waxa aanu doonaynaa inaanu guuleysano.”
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartooyada da’da weyni way ku yar yihiin xulka France, waxaana ruug caddaa u ah goolhayaha, hase yeeshee ciyaartooyada kale waa carruur.